Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » IRum kukutya kwakho kobuchopho, utywala, kunye nendlela yokuphila yaseNew York
Culinary • inkcubeko • Education • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo • Iiwayini kunye neMimoya
Ukuba rum ngoku
Iramu inokubekwa kwiqela LOKUTYA, emva kwayo yonke loo nto - yenziwe ngokupheleleyo kwizinto zomoba; Isenokuqwalaselwa njengeyona dessert, kuba iswiti. Nangona kunjalo, ngumoya kwaye ubekwe phakathi kotywala kunye nezibonelelo ezizodwa ezibandakanya iipropathi zokulwa ne-antibacterial, kwaye kucetyisiwe ukunyanga umqala womqala.
Ezinye iiramu zisempilweni kunezinye kwaye, i-rum emnyama, ishiye ukuya kubudala kwi-oki etshisiweyo okanye kwimigqomo yamaplanga eyinika umbala omnyama kunye nencasa ebukhali, ithathwa njenge inikezela ngee-antioxidants ezisempilweni.
Olunye uphando lubonisa ukuba i-rum inee-asethi ezinokunceda ukukhusela iiseli zengqondo.
Inokunciphisa umngcipheko onxulumene nesifo sengqondo esixhalabisayo kunye ne-Alzheimer's (UDavid Friedman, Ukutya okucocekileyo: Indlela yokutya kwiLizwe leeFashoni kunye neFiction).
Irum yenziwa ngeemveliso zeshukela ezifana neemolasses okanye isiraphu yommoba. Iswekile ikhutshelwe kubutywala obulwelo kumandla ohlukeneyo kwaye utywala ngevolumu (ABV) ibaleka ukusuka kwiipesenti ezingama-40-80, ihambisa malunga neekhalori ezingama-97 nge-8 oz. Ifoto yobungqina obungama-80 (kunye neCoke, yongeza ezinye iikhalori ezingama-88). Umgangatho weRum usekwe kubume beemolasses, ubude bokubila, uhlobo lwemigqomo esetyenzisiweyo, kunye nobude bexesha elisetyenziselwa ukuguga kwimigqomo.
Iirum zahlulwe ngombala (okt, mhlophe, mnyama / mnyama, golide, ngaphezulu), incasa (okt, izinongo / incasa) kunye nobudala. I-rum emnyama indala iminyaka eyi-2 + kwiibhanti zomthi wom-oki eziphuhlisa umbala omnyama / omdaka (ongacocwanga ngokulandela inkqubo yokuguga). Igolide okanye i-amber rum indala kwimiphanda ye-oki etshisiweyo ixesha elifutshane (iinyanga ezili-18). IKarmele inokongezwa emva kwenkqubo yokuguga ukubonelela ngombala wegolide ocacileyo. I-rum emhlophe (eyaziwa ngokuba yisilivere, ukukhanya okanye icacile) ihlala igcinwe kwimikhumbi yentsimbi engenanto okanye iikhaskhi kwaye ineminyaka engama-1-2 inesicoci samalahle asetyenziselwa ukukhupha nawuphi na umbala kunye nobumdaka emva kwenkqubo yokuguga kwaye inencasa elula kunaleyo I-amber okanye iirum ezimnyama kwaye zihlala zifumaneka kwii-cocktails endaweni yokutya okucocekileyo. I-rum eqholiweyo iyangeniswa ngexesha lesigaba sokudibanisa nesinamon, i-aniseed, ijinja, irosemary okanye ipepile kwiindawo ezifikelela kwiipesenti ezi-2.5. I-rum edibeneyo ihlala imnyama ngombala kunye noshukela okanye i-caramel ngamanye amaxesha yongezwa ngobumnandi.
Rum enxulunyaniswe nobukhoboka, iMvukelo kunye nokugula
Ngelixa i-rum imnandi kwaye idibanisa amaqela kunye ne-barbeque, isiselo sinombali omnyama kakhulu. Imbali inxibelelanisa irum (xa yayicocwa kumasimi eswekile ngenkulungwane ye-17) ukuya kubukhoboka apho abantu banyanzelwa ukuba bakhule kwaye basike ummoba phantsi kweemeko ezoyikisayo. Abasebenzi babenyanzelekile ukuba basebenze ngokungakhathali ukuvumba kunye nokususa i-molasses ukwenza i-rum eyayisetyenziswa njengemali yokuthenga amakhoboka amaninzi.
Ekuqaleni (kwaye kangangeenkulungwane ezininzi), umgangatho wemveliso wawuthathwa njengongaphucukanga nongabizi mali, ikakhulu usetyenziswa ngamakhoboka okutyala ummoba kwaye unxulunyaniswa namaqela entlalo noqoqosho asezantsi. I-Rum nayo yadlala indima ebalulekileyo kwimbali yomkhosi eyenzeka e-Australia, iRum Rebellion (1808), xa iRhuluneli uWilliam Bligh yachithwa ngokuyinxalenye ngenxa yokuzama kwakhe ukuphelisa ukusetyenziswa kwerum njengendlela yokuhlawula.
Ukurhweba ngamakhoboka eTrantic-Atlantic kwaphela ngekhulu le-19, nangona kunjalo, ubukhoboka banamhlanje buyaqhubeka (okt, ezolimo kunye nemizi-mveliso yokuthunga impahla eyolukiweyo). ISebe lezabaSebenzi laseMelika lifumanisa ukuba ukuqeshwa kwabantwana kuxhaphakile kwimveliso yeswekile kumazwe ali-18. Kwezinye iifama, abasebenzi basika induku ngesandla phantsi kobushushu obukhulu budala imingcipheko yezempilo. Uphando lufumanise ukuba uxinzelelo lobushushu lunokukhokelela kuphuhliso lwesifo sezintso esinganyangekiyo kwaye esihlala sibulala.
Uqikelelo lweDatha yeMakethi lufumanisa ukuba imarike yexabiso lehlabathi ixabisa i-US $ 25 yezigidigidi (2020) kwaye kuqikelelwa ukuba iyakukhula iye kwi-US $ 21.5 yezigidigidi ngo-2025. of 15.8 ipesenti pa kwisithuba seminyaka emi-2020 (7.0-5) njengoko kukho ukwanda kwemfuno jikelele premium iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye zomoya zodidi kugxilwe ubunyani kunye neempawu ezaziwayo-kakuhle.
I-USA ngoyena mthengi mkhulu we-rum ene-US $ 2435 yezigidi eziveliswe kwingeniso (2020) kunye nemilinganiselo yentengiso yesibini kuphela kwi-vodka kunye ne-whisky kudidi lwemimoya. Abona bavelisi baphambili beli rum ngamazwe aseLatin America naseCaribbean; Nangona kunjalo, i-USA ineziqalo ezininzi kolu luhlu nakwiiPhilippines, India, Brazil, Fiji nase-Australia. I-Euromonitor International ifumanisa ukuba i-India ikhokela kwimarike ye-rum yamanye amazwe.
Utshintsho / ucelomngeni kwiRum
Icandelo elitsha le-rum lilawulwa zizigidi zeminyaka (abantu abazalwe phakathi kwe-1981 kunye ne-1994/6) njenge-rum sisiselo esingabizi ngokuthelekiswa neminye imimoya. Le ntengiso kujoliswe kuyo inamandla okuchitha kwaye ibonisa uxabiso lotywala ngokukhetha iramu (ngaphezulu kwezinye iziselo ezinxilisayo). Ihlabathi linyanzela i-rum ukuba itshintshe njengoko abathengi bekhangela iimveliso ezineswekile encitshisiweyo, ezinzileyo, kunye namanqanaba epremiyamu. Abavelisi beRum bazise iimveliso ezintsha zerum kwindawo yentengiso kunye namava okungcamla ajolise kwiincasa ezinikezela nge-sweet, buttery, caramel, iziqhamo ezikweleenjiko, kunye namanqaku e-vanilla ahlala ephela nge-licoyice yomsi kunye nemolasses.
Isenokungabi lulwazi oluqhelekileyo, kodwa iiramu ezininzi zivelisa amazwe eCaribbean Abakhulisi ummoba weswekile kwaye bangenisa ummoba ekrwada, incindi yommoba okanye imolasses njengesiseko sabo kunye nokungenisa elizweni kudala imiceli mngeni emitsha kwezi ziqithi.
1. I-Molasses, imveliso ephuma kwimveliso yeswekile ayibizi kakhulu kunoko usebenzisa ummoba omsulwa kwimveliso yerum; Nangona kunjalo, njengoko ibango leswekile lincipha, imveliso yeswekile iyehla ngoko ke zimbalwa iinyibiliko ezifumanekayo zokuthumela ngaphandle. Ukuncipha kwemfuno kukwahlisa nexabiso leswekile kwaye oku kuyabakhathaza abavelisi beerum zokubonelela ngeemolasses zisenokutshabalala ngokupheleleyo njengoko amafama eshiya ummoba kwimveliso yezolimo enenzuzo ngakumbi. Kukwakhona ukuba imeko yempilo-ntle iyakukhuthaza oorhulumente okanye ezinye iiarhente zolawulo ukuba zibeke imida yokuqulatha iswekile echaphazela ukufumaneka kweswekile kunye neendleko zemveliso egqityiweyo.
2. Iinkqubo ezizinzileyo zemveliso zibalulekile kubasebenzisi beziselo ezintsha njengoko benxanelwe ukwanelisa iimfuno / neemfuno zabo kwangoko ngaphandle kokubeka emngciphekweni ikamva. Imveliso yeRum inegama lokuvelisa ifuthe lokusingqongileyo ngenxa yemfuno yomhlaba yokukhulisa ummoba, ipetroli ifunwa ukuba yenze ubushushu ukuguqula ummoba weswekile eluhlaza ube sisixhobo esinokuvuthwa kunye nenani lamanzi asetyenzisiweyo kwimveliso kunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo. ukupakishwa. Ukuhlangabezana neemfuno zokuzinza, ishishini kufuneka liqwalasele iindlela ezintsha zolawulo lwezixhobo kunye / okanye zolondolozo kwaye zenze iipakethe ezinokuboliswa ziintsholongwane okanye ezinobungozi kokusingqongileyo.
Kwiinkampani ezinomdla kwaye ezikwaziyo ukuhamba umgama, kwaye zijongane neemfuno zangoku, kukho iindaba ezimnandi njengoko abathengi bazimisele ukuhlawula amaxabiso epremiyamu kwiimveliso ezintsha nge-super-premium nangaphezulu ngokuhlelwa. IGolden Rum ilindele ukuba ibeyinto enkulu elandelayo kudidi lwemimoya, nentengiso ekulindelwe ukuba inyuke ngepesenti ye-33 ngo-2021. Kweli nqanaba lokukhula, izakudlula i-gin ngo-2022 (internationaldrinkexpo.co.uk).
Abantu baseNew York bamkela iRum
KwiRum Congress esekwe eManhattan, u-Federico J. Hernandez kunye ne-TheRumLab bacwangcise inkqubo enomdla kunye nemfundo ngokubambisana nomntu ngaphakathi kwamanqaku eeramu zamanye amazwe ezazonwabile ngamakhulu abahlobo kunye nabalandeli. Iiramu ezintsha zibonelela ngamava eemvakalelo adibana kwaye ahlala edlula kulindelo.
Ngaba uHoekenga, iARRO American Rum Report.com
Ngaba iGroves, Maggies Farm Rum. IPittsburg, PA
UKaren Hoskin, uMontanya Distillers, uCrested Butte, CO
URoberto Serralles, Destileria Serralles Mercedita, PR
UDaniel Mora, uRon Centenario, iRum yaseCosta Rico
I-Otto Flores, iBarcelo Rums, kwiRiphabhlikhi yaseDominican
U-Ian Williams, umbhali, iRum: Imbali yeNtlalontle kunye neNtlalontle yoMoya oyiNene we-1776
Umnyhadala weRum olandelayo ucwangciselwe uSeptemba 2021, eSan Francisco, CA. Ngolwazi olongezelelweyo: yiyyyengyangni
NgoSeptemba 5, 2021 kwi-13: 56
Kuvakala ngathi lukhetho olufanelekileyo kum!